Yakanakisa Rakareruka homwe coil yakabuda metiresi yakapetwa kaviri saizi yakasimba yakasimba yepamusoro Mutengesi | Rayson
Iine Hurefu Hutsindo hwakapetana Ruoko Pocket Spring Mattress
Rayson muRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Zvigadzirwa zvepamusoro Zvakanakisa Zviri nyore muhomwe coil yakabuda metiresi yakapetwa kaviri saizi yakasimba yakasimba pamusoro Mutengesi
Kutakura kwakachengeteka kunogona kuvimbiswa kwedu.
Isu tinovimbisa kuti zvigadzirwa zvinotumirwa kune vatengi zvakachengeteka uye zvine mutsindo. Kana iwe uine chero mibvunzo kana uchida kuziva zvakawanda nezveyedu, tifonere isu zvakananga. Zvakare, kuendesa kwedu kuri panguva uye kunogona kusangana nezvinodiwa zvevatengi vese. Mukufamba kwese kuita, vedu QC nyanzvi dzinozotarisa yega yega maitiro kuve nechokwadi chemhando yechigadzirwa.
Matiresi yako inofanira kugara kwenguva yakareba sei? Matiresi yega yega yakasiyana. Ukakanda husiku kana kumuka uchirwadziwa inguva yekuwana matiresi nyowani zvisinei nezera rayo. Tinokurudzira kutarisa mutemo wemutemo uye kutsiva angangoita ese makore masere.Ndingawana sei mamwe masampuli？ Mushure mekusimbisa chipo chedu uye titumirei sampu yemutengo, tichapedzisa sampuro mukati memazuva gumi neshanu. Iwe unogona kukumbira iyo yakajeka kambani kuti itore iyo sampuro kubva kukambani yedu kana iwe unogona kuti titumire DHL, FedEx kana UPS kuunganidza nhamba account, tinogona kutumira iyo sampuro kwauri neakaunzi yako.Ndingashanyira fekitori yako? Hongu, tinogamuchirwa kuti tishanyire fekitori yedu chero nguva, isu tiri padyo neGuangzhou Baiyun nhandare yenyika, zvinongotora awa imwe nemotokari, uye isu tinogona kuronga mota kukusimudza.